သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၇) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် သံဃာတော်အပါး (၁၅၀၀) အား တစ်ပွဲလျှင် (၃၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့် ချန်ပီယံဒံပေါက် ပွဲ (၁၅၀၀) လောင်းလှူနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စေတနာရှင် အလှူရှင်များမှ စေတနာသဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာဖြင့် ပါဝင်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူသွားကြပါတယ်ရှင်။ သာဓု..သာဓု..သာဓု... (ဒံပေါက်(၁၅၀၀ ပွဲ) အတွက် အလှူရှင်များ ပြည့်စုံသွားပါပြီရှင်။)
မြန်﻿မာပြည်﻿မှအလှူရှင်﻿များ ×××××××××××××××× (၁)ဦးမင်း﻿အောင်﻿လှိုင်﻿+﻿ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစု - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလှူ)
(၂)သီရိပျံချီဦးသိန်း﻿ဆွေ+﻿ဒေါ်မြသိင်္ဂီမိသားစု - ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၃၀၀ ပါးအလှူ)
(၃)ကိုဖွယ် + မသီရိ ၊သမီးလေး- ဧကရီ+ မေပိုးလေး မိသားစု- ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလှူ)
(၄)ကို﻿အောင်﻿ပြည့်﻿စုံ+မမျိုးရတနာထိုက်﻿ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလှူ)
(၅)ကိုမျိုးကြီးပန်းပျိုးသူ+ မလင်းလင်း မိသားစု - ၉၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၃၀ပါးအလှူ)
(၆)ကိုရန်နိုင်ချစ်+မယုမွန်ဝင်းဇော် မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ)
(၇)ကိုထွန်းနိုင်ဦး + မကေနွယ်ခင် မိသားစု (ရန်ကုန်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ)
(၈)ကိုအောင်စေမင်း +မသင်းလဲ့ရီ﻿မောင်﻿ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၅၀ပါးအလှူ)
(၉)ကို﻿အောင်﻿+မမြင့်﻿မြင့်﻿သန်း မိသားစု(မန္တ﻿လေး) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ) (U Kaw)
(၁၀)ဦးလှသိန်း+﻿ဒေါ်ကြူ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၅ ပါးအလှူ)
(၁၁).ဦးလှတိုး ၊ ဒေါ်သက်သက်ဦး၊ သမီးမလွင်မေသက်၊ သားမောင်လင်းထွဠ် မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ)
(၁၂)မယုယုဝင်း (သန့်တော်ဝင်အထည်ရောင်းဝယ်ရေး~အမရပူရမြို့)- ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ)
(၁၃)ကိုကျော်ကျော်အောင် + မထွန်းနေခြည်စိုး သမီးလေး- လင်းမြတ်နေခြည် (၁ နှစ်) ပြည့်အလှူ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၅ပါးအလှူ)
(၁၄) ဦးတွတ် ဒေါ်သန်းသန်းဌေးမိသားစု- ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ) -သံဃာတော်(၁၀)ပါး အတွက် အလှူငွေ (၃၀,၀၀၀)ကျပ်﻿ (U Kaw) (၁၅)ကိုညီညီ-မမိုးဝေမိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ) Moe Wai
(၁၆)ကိုအောင်ဖြိုးသန့်+မနှင်းဟေမာ သမီးပိုးနှင်းသန့် မိသားစု(USA) - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၅၀ပါး အလှူ )
(၁၇)Mr & Mrs Argus Ang Wei Kwang မိသားစု- ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၁၀ပါးအလှူ)
(၁၈)ကိုရဲဝင်းနိုင် + မဟန်စုယဉ် (USA) - ၉၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၃၀ပါးအလှူ)
(၁၉)ဦးလှကြည်+ ဒေါ်အေးအေးနွဲ့ သမီးသော်ဇင်မိုး မိသားစု- ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာ ၅ ပါးအလှူ)
(၂၀) မဇင်မြတ်စိုး (ဂျပန်) -၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၂၁)ဦးနေထွန်းမင်း +ဒေါ်ခင်ခင်လေး မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၂၂) ကိုကျော်စွာဟိန်း+မယဉ်အေးအေးမွှေးမိသားစု - ၉၀,၀၀၀ ကျပ် ( သံဃာတော် ၃၀ပါး )
(၂၃)လရောင်လေးမိသားစု ( ဂျပန်) -၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၂၄)မ၀တ်ရည်လှိုင် - ၄၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၅ ပါးအလှူ) Ma Latt
(၂၅)Chen Mei Chu & Wang Huei Man(Taiwan) -၉၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော်အပါး ၃၀ အလှူ)
(၂၆) Ma Swe Swe Myint,$ Ma Khin Sabai (စင်္ကာပူ)- ( ၃သိန်း) ကျပ် (သံဃာတော်အပါး ၁၀၀ အလှူ) Swe Swe Myint
(၂၇)မငုဇာခိုင် (စင်္ကာပူ)- ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) Ngu Zar Khine
(၂၈)ဦးဝင်းဌေး + ဒေါ်ခင်မြဆွေ ၊သား- Dr.ထိန်ဝင်း မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၅ ပါးအလှူ) Htein Win
(၂၉)ဒေါ်မြမြဌေး ၊ သမီး- Dr.နှင်းအေးယဉ် - - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၅ ပါးအလှူ) Hnin Aye Yin
(၃၀)ကိုမျိုးသွင် +မစောမြသန္တာဝင်း - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) Thandar Win
(၃၁) ဦးစိုင်းကျော်စိုးမျိုး + ဒေါ်အေးအေးခိုင် သမီး မခိုင်ဇင်သက် ၊ သား မောင်အုပ်စိုးခန့် မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) Phyo Wai
(၃၂)မိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုအောင်မင်းဦး (UK) - ၉၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၃၀ပါးအလှူ) Aung Min Oo
(၃၃)နှစ်ဖက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုနန်း + မမွန် မိသားစု- ၁၂၃,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၃၁ပါးအလှူ) Mon Yee (၃၄)Dr.မြတ်ဥာဏ်+ ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) (၃၅)ကိုလှသန်းမိုး + မစောသွယ်အေး (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) Saw Thwe Aye
(၃၆)Steven & Amy (Singapore) - ၆၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၂၀ပါးအလှူ) (၃၇)ကိုဟိန်းထက်﻿﻿အောင်﻿+မဝင်းမာထွန်း(စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ကျပ်﻿ (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) Win Moetain
(၃၈)ဒေါက်တာသီတာညွန့်သန်း (တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရူပဗေဒဌာန စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ်) - ၉၀၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော်အပါး ၃၀ အလှူ) (U Kaw)
(၃၉)ဦးကိုကိုထွေး +ဒေါ်အေးအေးသန်း မိသားစု (တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီ) - ၁၈၆,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော်အပါး ၆၂ပါး အလှူ) ====================================== မြန်မာပြည်မှ သံဃာတော် ( ၁၃၁၃ ပါး )အတွက် အလှူ ======================================
(၁)ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် + မနှင်းယုယုဝင်း သမီးလေး -မအေးချမ်းပွင့်﻿ဖြူ မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၄၈,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၆ပါးအလှူ)
(၂) မရီရီမြိုင်﻿(စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၃)မမင်းမင်းခိုင်﻿(စင်္ကာပူ) - ၄၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၅ပါးအလှူ)
(၄)ကိုမျိုးဦး+မခိုင်﻿ခင်﻿ဝင်း သမီး﻿လေး ချိုသာကြည်﻿သန့်﻿ မိသားစု (စင်္ကာပူ ) - ၅၄,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၈ပါးအလှူ)
(၅)မ﻿အေး﻿အေးဆန်း(စင်္ကာပူ) - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၅၀ပါးအလှူ)
(၆) ကိုဇွဲပြည့်ဖြိုး + မအိအိခိုင် (စင်္ကာပူ) - ၉၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၃၀ပါးအလှူ)
(၇)ကိုကြည်ဇော်သက် +မရွှန်းလဲ့မေ (စင်္ကာပူ) -၅၄,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၈ပါးအလှူ) ====================================== စင်္ကာပူ မှ သံဃာတော်အပါး (၁၅၇ ပါး) အတွက် ======================================
(၁)ကိုမျိုး﻿အောင်﻿+မအိ﻿ဆွေမြင့်﻿ သား﻿မောင်﻿﻿ကောင်းထက်﻿နိုင်﻿ သမီးမယွန်း﻿ရွှေရည်﻿ မိသားစု(ထိုင်﻿ဝမ်﻿) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၂)ကို﻿အေး﻿မောင်﻿+မ﻿ဆွေ﻿ဆွေဝင်း သမီး ချိုပြုံး ဘိုမ မိသားစု (ထိုင်﻿ဝမ်﻿) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ)
(၃)ကိုအောင်ကျော်စိုး + မကေသွယ်ဝင်း၊သား- မောင်အောင်ဟိန်းသန့် မိသားစု- ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ပါးအလှူ) ===================================== ထိုင်ဝမ် မှ သံဃာတော်အပါး (၃၀ ) အတွက် =====================================
Ps.ဆက်သွယ်လှူဒါန်းထားပါသော်လည်း အလှူရှင်စာရင်းတွင် အမည်မပါဝင်သေးပါက ဆက်သွယ်ပြောကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်- ၀ါဝါခိုင်မင်း (Ph- 09402777916)
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ပုလဲမြို့သစ် လွယ်ကန်သီလရှင်ကျောင်း ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း နှင့် အလှူရှင်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
ဇူလိုင်လအတွက် နေ့ဆွမ်းအလှူ ရှင် မရှိသေးသောနေ့များ
×××××××××××××××××××××××××××× (၂၀)(၂၄)(၂၅) (၂၇) (၂၈) (၂၉) ( ၃၀) ×××××××××××××××× မင်္ဂလာပါရှင်... _/\__ _/\__ _/\__ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့သစ် ၊လွယ်ကန်နေလရောင်ခြည် သီလရှင်ကျောင်းတွင် မိဘမဲ့ကလေးများနှင့်
သီလရှင်ဆရာလေး အပါး (၁၃၀ ကျော်) သီတင်းသုံးနေထိုင်လျှက်ရှိပြီး ဆရာလေးများ၏ (အရုဏ်ဆွမ်း+ နေ့ဆွမ်းအလှူ ) အတွက် စေတနာရှင်အလှူရှင်များအနေနှင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြစေရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ လွယ်ကန်သီလရှင်ကျောင်းတွင် အဝေးမှလာရောက် နေထိုင်သီတင်းသုံးကြသည့် သီလရှင်ဆရာလေးများ တိုးလာပါသောကြောင့် မူလသတ်မှတ်ထားသော အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ငွေ (၁၅,၀၀၀ ကျပ်ကို ၃၀,၀၀၀ ကျပ်) တိုးမြှင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လစဉ်အလှူရှင်များအနေနှင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေသလို ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ×××××××××××××××××××××××××××××× ဂျူလိုင်လ အလှူရှင်မှတ်တမ်း ××××××××××××××××××× ❖ ၁။ (၁.၇.၂၀၁၆) သောကြာနေ့ ၁။ David Tan+Daisy Aye - ၁၅,၀၀၀ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းလစဉ် ၁ရက်နေ့တိုင်း) (ဆရာထိန် မှ ဆရာလေးထံ 2016 Decအထိလွှဲပြီး )
- ၂။ ကိုနေလင်း + မသီတာ ၊သား- ဒန်နီယယ်မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၁၅,၀၀၀ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) (Nov 2015 - Oct 2016ထိလွှဲပြီး) (Ko Nay Lynn - Phyo) ၃။ Boilermaster မိသားစုကောင်းမှု - ၅၀၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်(၁)ရက်နေ့တိုင်း နေ့ဆွမ်းအလှူ) (ကိုငယ်လေး) (April 2016 – June 2016 အထိလက်ခံရရှိပြီး)
❖ ၂။ (၂.၇.၂၀၁၆) စနေနေ့ ၁။ ကိုကျော်နိုင်ဆွေ+မယုယုစံ ၊သမီး- အိန္ဒြာဖူးငုံ၊ စန္ဒီဖူးငုံ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (2015 July- 2016 June အထိလွှဲပြီး)
၂။ ကိုဝင်းထွန်းလတ် + မမြင့်မာလာစမ်း သား လင်းဝေယံအောင်၊ သမီး ခေတ်ဝသန်သာ မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၃၀၀၀၀ကျပ် (လစဉ် ၄ရက်နေ့) (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Phyo) ၃။မအေးမြကြူ မွေးနေ.အလှူ - ၅၀,၀၀၀ကျပ်﻿(﻿နေ့ဆွမ်းအလှူ )(DNWWM)
❖ ၃။ (၃.၇.၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့ ၁။ မအိမွန်မွန် (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၃ ရက်နေ့အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Ma Ei Mon Mon - Phyo) (နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ အရုဏ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ်တိုးမြှင့်လှူ ဒါန်းသွားပါသည်ရှင်)
၂။ မခိုင်ဇင်ဝင်း ၊မကြည်မြတ်မိုး ၊ မမျိုးမာလာမြင့် ၊မသိဂီင်္ဝင်း ၊ မအိခိုင်ဇော်မြင့် (စင်္ကာပူ) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (Feb 2016 - Jun 2016 ထိလွှဲ ပြီး) (Ma Khaing Zin Win - Phyo)
❖ ၄။ (၄.၇.၂၀၁၆) တနင်္လာနေ့
၁။ ကွယ်လွန်သူ အဘိုး၊အဘွား၊အဖေ တို့ကို ရည်စူး၍ မခင်စန္ဒီဆွေ (စင်္ကာပူ) နှင့် မိသားစု ကောင်းမှု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်ပထမပတ်တနင်္လာနေ့အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Ma Khin Sandi Swe - Phyo) ၂။ ဦးသိန်းအောင် + ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု -၅၀,၀၀၀ကျပ် (လစဉ်ပထမပတ် တစ်လခြားတခါ လှူပါမည်။) (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (Phyo)
❖ ၅။ (၅.၇.၂၀၁၆) အင်္ဂါနေ့ ၁။ ကိုမင်းကျော်သူ+မသက်ရည်ရည်ထက် သမီးမာန်မြင့်မိုရ် မိသားစု (ဂျပန်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၅ ရက်နေ့) (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (DZMS) ၂။ မြေးလေး ကောင်းဆက်သော် ၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ဖွားဖွားဒေါ်တင်တင်ဌေးကုသိုလ်၅၀,၀၀၀ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (DZMS)
❖ ၆။ (၆.၇.၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁။ ချိုမေလွင် (၃၅)ပြည့်မွေးနေ့အလှူ - ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် (တနေ့တာအလှူ) (Phyo)
❖ ၇။ (၇.၇.၂၀၁၆) ကြာသပတေနေ့ ၁။ Candour Tree Co.,Ltd (Singapore) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၇ရက်နေ့ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ရှင်) (၇.၁၁.၂၀၁၅ မှစလှူ ) (Ma Ei Mon Mon - Phyo)
၂။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးဦးခင်မောင်ပွား(ကောလင်း) ၅နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ သမီး ခင် မျိုးမျိုးနှင့်မောင်နှမမြေးမြစ်တစ်စု ကောင်းမူ - ၅၀,၀၀၀ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (DZMS) ၃။ ကိုတေဇာ + မမိုးဇာ - ၅၀,၀၀၀ကျပ် (လစဉ် ၇ရက်နေ့ - ရေမီးအလှူ) (DNWWM) (Jul 16 to Jul 17 တနှစ်စာမမ၀ါဆီလွှဲပါမည်)
❖ ၈။ (၈.၇.၂၀၁၆) သောကြာနေ့
၁။ ဦးသိန်းထွန်းအောင်+ဒေါ်သီသီ(Yuriko) သမီးမအိန္ဒြာအောင်(Natsumi) မလမင်းအိန္ဒြာအောင်(Ayumi) Bright Wing ကုမ္ပဏီ မိသားစုမှသမီးကြီးမအိန္ဒြာအောင်(Natsumi)မွေးနေ့အလှူ - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (DZMS) ၂။ ကိုအံ့ထူးနိုင်+မနှင်းယုလွင် (စင်္ကာပူ) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ် ၈ ရက်နေ့) (Ma Hnin Yu Lwin - Phyo)
❖ ၉။ (၉.၇.၂၀၁၆) စနေနေ့ ၁။ ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး+မအိအိချို (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၉ ရက်နေ့) (Jan 2016 မှစ၍ လစဉ်၃၀,၀၀၀ ကျပ် အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Ma Ei Cho - Phyo) ၂။ ကိုကျော်ခိုင်ဝင်း + မအိအိထွေး - ၅၀,၀၀၀ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (ဆရာလေး)
❖ ၁၀။ (၁၀.၇.၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့ ၁။ ကိုအောင်ဇော်မင်းသွင်+မတင်အေးဇင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် တနင်္ဂနွေ - အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (May 2016 - Oct 2016 ခြောက်လစာ S$210 လွှဲပြီး) (Ma Tin Aye Zin - Phyo) ၂။ ဦးအောင်+ဒေါ်စန်းမြင့် မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (အာရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ်) (Aug 2015-July 2016ထိလွှဲပြီး)(DNWWM) ၃။ ဦးစိုးဌေး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း သိင်္ဂီင်္ဥယျာဉ်မိသားစု (သာဂရမြို့) - ၅၀,၀၀၀ကျပ် (လစဉ် - နေ့ဆွမ်းအလှူ) (EiSwe)
❖ ၁၁။ (၁၁.၇.၂၀၁၆) တနင်္လာနေ့
၁။ ကိုမင်းသန်းထိုက်အောင် + မဖြိုးဖြိုးအိ ၊ သား - မင်းကောင်းဆက်နောင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၁၁ ရက်နေ့ - ရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Jun 2016 မှ Dec 2016 ထိ ၇လစာကို ဖြိုးထံသို့ လွှဲပြီး) (Ma Phyo Phyo Ei - Phyo) ၂။ ကိုကျော်သူရ + မတင်ဇာလှိုင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်၁၁ ရက်နေ့) (Jan 2016 မှစတင်ပြီး လစဉ် အရုဏ်၃၀,၀၀၀ ကျပ် လှူပါမည်) (Ma Ei Mon Mon - Phyo) ၃။ဒေါ်သင်းသင်းဝမ် အားအမှူးထား၍ ဟေမာမြတ်ခိုင် အလှူ - 50,000ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ )
❖ ၁၂။ (၁၂.၇.၂၀၁၆) အင်္ဂါနေ့ ၁။ကိုအောင်မင်းထက် + မစောသွယ်မွှေး (သား) မောင်ဘုန်းမင်းမြတ် (၂) လပြည့် မွေးနေ့ အာရုံဆွမ်း အလှူ - ၃၀၀၀၀ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ )
၂။ မစန္ဒာအေး မွေးနေ့အလှူ - ၅၀,၀၀၀ကျပ်(နေ့ဆွမ်းအလှူ ) (DNWWM)
❖ ၁၃။ (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁။ စေတနာရှင်ဓမ္မသူငယ်ချင်းတစ်စု - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်တနေ့တာအလှူ ) (Ma Hnin Yu Hlaing - Phyo)
❖ ၁၄။ (၁၄.၇.၂၀၁၆) ကြာသပတေနေ့ ၁။ ဦးမင်းအောင်လှိုင် + ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစု(ရန်ကုန်) - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ +အအေးအလှူ ) (လစဉ် ၂ရက်လှူ ဒါန်းပါမည်) (Ma Khin Thiri Thet Swe - DNWWM)
❖ ၁၅။ (၁၅.၇.၂၀၁၆) သောကြာနေ့ ၁။ ကိုရဲသူမော်+မသွယ်ဇင်မျိုး (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ်သောကြာနေ့) (Ma Thwe Zin Myo - Phyo) ၂။ကိုနေလင်းအောင်( Senior Staff Nurse, Singapore)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(PTDH) Nay Linn Aung
၃။ ကိုပြည့်စုံထွေး + မမာမာဝင်းဆွေ ၊ သမီး- ပြည့်ထက်မှုးကို ၊ ကလျာပြည့်ရွှေရည်မိသားစု - ၅၀၀၀ကျပ် (ရေမီးအလှူ) (Phyo) (June 2016 - May 2017 အထိ လစဉ် ၁၅ ရက်နေ့ တိုင်း တစ်နှစ်စာ အလှူ ငွေ ၆၀,၀၀၀ ကျပ် လက်ခံရရှိပြီး)
❖ ၁၆။ (၁၆.၇.၂၀၁၆) စနေနေ့ ၁။ ကိုဖွယ် + မသီရိ ၊ သမီးလေး- ဧကရီ + မေပိုးလေး မိသားစု - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်+နေ့ဆွမ်းအလှူ +အအေးအလှူ ) (လစဉ် ၂ ရက်လှူဒါန်းပါမည်။) (Ma Khin Thiri Thet Mon - DNWWM)
❖ ၁၇။ (၁၇.၇.၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့ ၁။ ကိုအောင်စေမင်း+မသင်းရီမောလဲ့င် (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ် ၁၇ ရက်နေ့ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (April 2016 - June 2016 သုံးလစာS$105 လွှဲထားပြီး) (Ma Thinn Lei Yee Maung - Phyo)
၂။ကိုနေလင်းအောင်( Senior Staff Nurse, Singapore)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(PTDH)
❖ ၁၈။ (၁၈.၇.၂၀၁၆) တနင်္လာနေ့ ၁။ ဦးမင်းအောင်လှိုင် + ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစု(ရန်ကုန်) - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ +အအေးအလှူ ) (လစဉ် ၂ရက်လှူ ဒါန်းပါမည်) (Ma Khin Thiri Thet Swe - DNWWM)
❖ ၁၉။ (၁၉.၇.၂၀၁၆) အင်္ဂါနေ့ ၁။ မဇာဇာအောင် (စင်ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ် အင်္ဂါနေ့) (April 2016 – June 2016 ထိ S$105 ထိလက်ခံရရှိပြီး) (Ma Zar Zar Aung -Phyo)
၂။ နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှူးထား၍ စိုင်းမျိုးဇော်ကို မသီတာလှမော် သားလေး သားပီတိ (ခေါ်) စိုင်းအဂ္ဂမော်ကွန်း မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ကျပ်﻿(﻿နေ့ဆွမ်းအလှူ )(DWWKM)
❖ ၂၀။ (၂၀.၇.၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁။ကျူးရာရင်း မွေးနေ့အလှူ - 30,000ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ )( Vivienne Pan /ES) ၂။ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး မွေးနေ့အလှူ - ၅၀,၀၀၀ကျပ် (နေ့ဆွမ်းအလှူ) (ma sandi - Phyo)
❖ ၂၁။ (၂၁.၇.၂၀၁၆) ကြာသပတေနေ့ ၁။ မသီရိလေး (ရန်ကုန်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၂၁ ရက်နေ့) (2014 Decအထိလွှဲပြီး) (2016 Jan မှစပြီး 30,000ကျပ်တိုးမြှင့်လှူဒါန်းမည်) (DNWWM) ၂. မဟန်စုယဉ် (၄၀ နှစ်ပြည့်) မွေးနေ့အလှူ - 50,000ကျပ် (နေ့ဆွမ်း အလှူ ) (DNWWM)
❖ ၂၂။ (၂၂.၇.၂၀၁၆) သောကြာနေ့ ၁။ ဦးမင်းအောင်လှိုင် + ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစု(ရန်ကုန်) - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ +အအေးအလှူ ) (လစဉ် ၂ရက်လှူ ဒါန်းပါမည်)(DNWWM)
❖ ၂၃။ (၂၃.၇.၂၀၁၆) စနေနေ့ ၁။ ကိုကျော်ခိုင်ဝင်း + မအိအိထွေး - ၃၀,၀၀၀ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) (ဆရာလေး) ၂။ ဦးဘိုနီ + ဒေါ်ခင်ခင် ၊သမီး-မတင်မိုးနီ မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၂၃ ရက်နေ့တိုင်း နေ့ဆွမ်း အလှူ ) Tin Moe Ni (Jan - Feb 2016) (DNWWM)
❖ ၂၄။ (၂၄.၇.၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့ ၁။ မိဘနှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ မရတနာလွင် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ( လစဉ် ၂၄ ရက်တိုင်း) (Jun-Dec 2016ထိ ၂၁၀,၀၀၀ကျပ် ဆရာလေးတို့ဆီလွှဲအပ်လှူဒါန်းပြီးပါပြီ။) ၂။
❖ ၂၅။ (၂၅.၇.၂၀၁၆) တနင်္လာနေ့ ၁။ ကိုဇာနည်အောင် (အောင်မြင် စာပေမိသားစု) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်း အလှူ) (လစဉ် 25ရက်နေ့) (Jan 2016 - June 2016 ထိ ဆရာလေးဆီလွှဲပြီး) (DNWWM) ၂။
❖ ၂၆။ (၂၆.၇.၂၀၁၆) အင်္ဂါနေ့
၁။ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးတင့်ဇော်အားရည်စူး၍ ကိုမျိုးမြင့်+မသင်းယုဇော် မိသားစု (စင်္ကာပူ)- ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၂၆) (အရုဏ်ဆွမ်း အလှူ ) (Sep 2015 - Aug 2016 ထိလွှဲပြီး) (Ma Thin Yu Zaw - Phyo) ၂။
❖ ၂၇။ (၂၇.၇.၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁။ ဦးလုံးစိန်+ဒေါ်ဋ္ဌေးဋ္ဌေးရီ မိသားစု - ၂၃,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (လစဉ် ၂၇ ရက်နေ့) (Jan 2016 - Dec 2016 ထိလွှဲပြီး) (Ma Swe Swe Yuu - Phyo) ၂။
❖ ၂၈။ (၂၈.၇.၂၀၁၆) ကြာသပတေနေ့ ၁။ ကိုခင်မောင်လေး+မမီမီခင်လေး မိသားစု (USA) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) Miemie ၂။
❖ ၂၉။ (၂၉.၇.၂၀၁၆) သောကြာနေ့
၁။ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်စောစန္ဒာခင်အားရည်စူး ၍ ဦးသိန်းဌေး ၊သား -ကိုစိုးသူအောင်+မမြမြသွင် ၊သမီး-ယွန်းရွှေလွှာ ၊ ကိုခန့် ညားအောင်မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၂၉ရက်နေ့ အာရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ) (Ko Soe Thu Aung - Phyo) (ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၆ မှစ၍ ၃၀၀၀၀ကျပ် စလှူ ပါမည်) ၂။
❖ ၃၀။ (၃၀.၇.၂၀၁၆) စနေနေ့ ၁။ မငုဇာခိုင် (စင်္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်အရုဏ်ဆွမ်း အလှူ ) (Jan 2016 - Dec 2016) (Ma Ngu Zar Khine - Phyo) ၂။
❖ ၃၁။ (၃၁.၇.၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့
၁။ ကိုဖွယ် + မသီရိ ၊ သမီးလေး- ဧကရီ + မေပိုးလေး မိသားစု - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အရုဏ်+နေ့ဆွမ်းအလှူ +အအေးအလှူ ) (လစဉ် ၂ ရက်လှူဒါန်းပါမည်။) (Ma Khin Thiri Thet Mon - DNWWM)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× Ps.ဆက်သွယ်လှူဒါန်းထားသော်လည်း အလှူရှင် စာရင်းတွင် မိမိတို့နာမည်မပါဝင်သေးပါက ဆက်သွယ်ပြောကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ရှင်.... ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်- ××××××××××××××× 1.လွယ်ကန်နေလရောင်ခြည် သီလရှင်ကျောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးမှတ်တိုင်၊ လွယ်ကန်နေလရောင်ခြည် သီလရှင်ကျောင်း သီရိသုခလမ်းသွယ်(၄)၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ ဆရာလေး PH : 09250283364 / 09420070969 ငွေလွှဲရန်- Account No: 0661210103046 (KBZ Bank), 0094201010037039 (AYA Bank) Name: DAW THU MAR LAR
2. Dr. ထိန်ဝင်း Htein Win PH : 095130418
3.ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း (Ph-09402777916) ငွေလွှဲရန်- DAW WAR WAR KHAING MIN KBZ(YanKin) 127-501-00200276901 AYA(YZT) 0082223010001559
4.မဖြိုးသီတာဌေး (စင်္ကာပူ) Phyo Thida Htay Bank acc : POSB Savings 133-21318-0 PH : 90076177
5.မသဇင်ထိုက်(စင်္ကာပူ) Tz Htike Ph-98560989 POSB saving -178-30770-3 6.မအိဆွေမြင့် (ထိုင်ဝမ်) Ei Swe chunghwa post: 0311710 0531228 PH: 0905153074
7.မဇင်မြတ်စိုး(ဂျပန်) Daw Zin Myat Soe JP bank : 10040 66669711 PH : 080-3389-8255
နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု ဖောင်ဒေးရှင်း လစဉ်ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့မှုနှင့် အလှူရှင်များ မှတ်တမ်း
မင်္ဂလာပါရှင်-အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဖောင်ဒေးရှင်း လစဉ်အလှူရှင်များမှ ဖော်ပြပါ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား(၃ ဦး) အား လစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။(၁)မချိုချိုဝင်း (တတိယနှစ် ၊ဆေးတက္ကသိုလ်၊မန္တလေး) - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2012 Dec မှစတင်၍ လစဉ် ၂ သိန်းကျပ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသော်လည်း 2015 July လမှ စတင်ကာ လစဉ် ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။)(၂)မောင်အောင်မင်းလွင် (နောက်ဆုံးနှစ် ၊သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်)- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2013 May - 2015 Dec ကျောင်းပြီးသည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။)(၃)မောင်ဇင်မင်းထိုက်(ဒုတိယနှစ်၊ဆေးတက္ကသိုလ်၊မန္တလေး)- ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်(2012 Dec မှ စတင်ကာ လစဉ် ၂သိန်းကျပ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသော်လည်း ဒုတိယနှစ်စာမေးပွဲကျပါသောကြောင့် 2015 July မှစတင်ကာ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး 2015 Sep မှ ပြန်လည်၍ တစ်လ ၁ သိန်း ထောက်ပံ့ပါသည်။)(၄)မောင်တင့်နိုင်ထွန်း(တတိယနှစ်၊ဆေးတက္ကသိုလ်၊မန္တလေး) - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်(2013 May မှစတင်ကာ 2015 June လအထိ ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသော်လည်း တတိယနှစ် စာမေးပွဲကျ၍ ဆက်လက်မထောက်ပံ့တော့ပါ။)----------------------------------------------------------------------------------လစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးငွေ စုစုပေါင်း = ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်-----------------------------------------------------------------------------------လစဉ်အလှူရှင်မှတ်တမ်း(မြန်မာပြည်)×××××××××××××××××××××××××၁.Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီး-မေမြတ်နိုးခိုင် မိသားစု(ရန်ကုန်)- ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec မှစတင် 2015 အထိ ဆက်လက်လှူဒါန်းပါမည်။)၂.မမိုးမခမေ (ရန်ကုန်) Moemakha May MJ - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec မှစတင် 2015 Nov) ၃.မမျိုးနေဇာ (ရန်ကုန်) Myo Zar - - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec မှစတင် 2015 အထိ လစဉ် ဆက်လက်လှူဒါန်းပါမည်။) ၄.မမိုးမိုးနိုင် (USA ) Moe Forevermoe - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec မှစတင် 2015 Dec ) ၅.ကိုကောင်းရဲမင်း + မအိရွှေဝါမြင့်(ရန်ကုန်) Ai Shwewar Myint - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec မှစတင် 2015 Dec) ၆.ဦးမင်းထက်ကျော်ဇင်+ဒေါ်နန်းသန္တာအောင် မိသားစု(ရန်ကုန်) - ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ်) ၇.သစ်ခက်အိမ်+ဝေ(Eco) Wai Wai Tun မိသားစု(ပြည်) - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2013 May မှ 2015 Dec) ၈.ကိုအောင်ခင်ဇော်+မဇင်ပပထွန်း(စင်္ကာပူ) -၁၀,၀၀၀ ကျပ်(2013 May- 2014 Feb- 2015 Sep) ၉.မယုယုဝင်း (သန့်တော်ဝင်အထည်ဆိုင်) - ၅,၀၀၀ ကျပ် (လစဉ် - ၅,၀၀၀ ကျပ်လှူဒါန်းပါသည်။ ) ၁၀.မဖြိုးဝေခိုင် (ရန်ကုန်) - ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (2014 ဇွန်လမှစတင် လစဉ်လှူဒါန်း) ၁၁.ကိုအောင်သန့် + မဇွန်ဇွန် (ရန်ကုန်) - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2014 ဇွန်လ - 2015 Oct အထိ လက်ခံရရှိပြီး) ၁၂.ကိုဇော်နိုင်ဝင်း + မခင်နှင်းစိုး မိသားစု(ရန်ကုန်) - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2014 ဇွန်လမှ -2016 May) ၁၃.ကိုမျိုးဦး +မခိုင်ခင်ဝင်း ၊သမီးလေး-ချိုသာကြည်သန့် (Emily)မိသားစု (စင်္ကာပူ)- ၁၀,၀၀၀ ကျပ် (2012 Dec - 2015 Dec) -----------------------------------------------------------------------------မြန်မာပြည်မှ လစဉ် လက်ခံရရှိငွေပေါင်း - ၁၄၅,၀၀၀ ကျပ် (2015 dec အထိ)-----------------------------------------------------------------------------လစဉ်အလှူရှင်မှတ်တမ်း (စင်္ကာပူ)×××××××××××××××××××(1) မချယ်ရီစိုး - (S$ 15) (2015 Jan - 2015 Sep)(2) ဦးအောင်မိုး + ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သား - မင်းဟိန်းအောင် ၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု (S$ 15) (2015 Jan- 2015 Sep)(3) မနှင်းနုအေး - (S$15) (2015 Jan - 2015 Sep)(4) မသန္တာဝင်း - (S$ 15) (2015 Jan - 2015 Sep)(5) အနန္တငါးပါး ဦးထိပ်ထား၍ မအေးအေးသိန်း@Angela နှင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများကောင်းမှု - (S$ 50)(2015 Jan - 2015 Sep) (6) ကိုမင်းကျော်ဇင် + မနိုင်နိုင်ဦး - (S$20)(2015 Jan - 2015 Sep) (7) သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (ပညာရေး)- (S$70) (2013 Oct - 2015 Sep)(8) ကိုဇော်ဝင်းမြင့် + မတင်ဇာပိုင်- (S$15) (2012 Dec - 2015 Sep)(9) မစုငယ်ဝင်း- (S$15)(2012 Dec - 2015 Sep) (10) မရီရီမြိုင် - (S$ 25 ) (2015 May - 2015 Sep)(11)မဖြူဖြူသန့်+ မချိုချိုသန့် (စင်္ကာပူ) - S$15 (2012 Dec - Nov 2015) (12) မကြည်ဖြူပိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) - S$ 15 (2012 Dec - Oct 2015) (13)မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ) - S$ 15 (2012 Dec - 2015 Nov )(14)ကိုရဲရင့်နီ + မချိုးချိုး (စင်္ကာပူ) - (S$15)(2012 Dec- 2015 Oct)---------------------------------------------------------------------------------စင်္ကာပူမှ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း (ဇွန်လ) = ၂၇၄,၀၅၀ ကျပ် (S$315 ×870)စင်္ကာပူမှ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း (ဇူလိုင်လ)=၂၈၁,၉၂၅ ကျပ်(S$315 ×895)စင်္ကာပူမှ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း(သြဂုတ်လ)=၂၈၃,၅၀၀ ကျပ် (S$315 ×900) စင်္ကာပူမှလက်ခံရရှိငွေပေါင်း(စက်တင်ဘာလ)=၂၈၃,၅၀၀ကျပ်(S$315×900)----------------------------------------------------------------------------------Ps.ဆက်သွယ်လှူဒါန်းထားပါသော်လည်း အလှူရှင်စာရင်းတွင် မိမိအမည်မပါဝင်သေးပါက ပြောကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။-------------------------------------------------------------------------------------ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်- ××××××××××××××× 1.မ၀ါဝါခိုင်မင်း Nan War War Mgဖုန်း-09402777916 ငွေလွှဲရန် - DAW WAR WAR KHAING MINKBZ(MDY-27 ) - 242-501-00200276901 AYA Bank Acc - 0082223010001559 2.မစုငယ်ဝင်း(စင်္ကာပူ) Su Nge WinPosb Saving 245-66999-2 Ph- 91136144လေးစားစွာဖြင့်- ၀ါဝါခိုင်မင်း (နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု ဖောင်ဒေးရှင်း) Share
မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များမှတ်တမ်း
မြန်မာပြည်အ၀ှမ်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်တွင်း ပြည်ပစေတနာရှင် အလှူရှင်များမှ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး (၂၈.၈.၂၀၁၅)နေ့အထိ လက်ခံရရှိသော အလှူငွေ စုစုပေါင်းမှာ (၄၆,၄၂၅,၇၅၈ ကျပ်) ဖြစ်ပြီး ယနေ့ (၄.၉.၂၀၁၅)နေ့အထိ လှူဒါန်းပြီး အလှူငွေ စုစုပေါင်းမှာ (၃၂,၈၈၀,၀၀၀ ကျပ်) ဖြစ်ပါသောကြောင့် လက်ကျန်အလှူငွေမှာ (၁၃,၅၄၅,၇၅၈ ကျပ်) ဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပအလှူရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
လက်ကျန်အလှူငွေများကို ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဆက်လက်လှူဒါန်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။။။
(28/9/2015)နေ့အထိ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ ကျပ် (4/9/2015)နေ့အထိ လှူဒါန်းပြီးအလှူငွေစုစုပေါင်း=၃၂,၈၈၀,၀၀၀ ကျပ် --------------------------------------------------------------------------- လက်ကျန် အလှူငွေ စုစုပေါင်း = ၁၃,၅၄၅,၇၅၈ ကျပ်
1.မြန်မာပြည်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၁၀,၆၁၂,၀၅၈ ကျပ်
2.စင်္ကာပူမှ လက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်း = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ ကျပ်
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats) 3.USA မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၄,၀၇၄,၂၀၀ ကျပ်
4.မလေးရှားမှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၇,၃၂၇,၀၀၀ ကျပ်
5.ထိုင်ဝမ်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
6.ဂျပန်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၁,၉၇၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၈.၉.၂၀၁၅)နေ့အထိ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း = ၄၆,၄၇၅,၇၅၈ ကျပ်
နန်းဝါ၀ါမောင် နှင့် ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူ မောင်နှမများအဖွဲ့-
(၁) နန်းဝါ၀ါမောင် နှင့် ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူ မောင်နှမများအဖွဲ့-
( ၂ သိန်း)ကျပ်
(၂)ဒေါက်တာသက်ထွန်းအောင်+ မမြတ်သူခိုင် - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၃)ဦးတီပိုး + ဒေါ်ချင်းဟွာ မိသားစု - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၄)ကိုအောင်ဖြိုး - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၅)ကိုဇော်နိုင်ဝင်း+မခင်နှင်းစိုး မိသားစု(ရန်ကုန်) - (၂ သိန်း) ကျပ်
(၆)ဒေါ်ခင်အေးသာ မွေးနေ့အလှူ - (၁သိန်း)ကျပ်
(၇)ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် ၊သား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု (ထိုင်ဝမ်)-၆၀,၀၀၀ ကျပ်
(၈)Gift4You Online Gift Shop Family မှ ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၉)ရရှားရောက် မြန်မာမိသားစုနှင့် ကျောင်းသားများ - ( ၆ သိန်း) ကျပ်
(၁၀)ဦးကိုကိုနိုင်+ဒေါ်မြင့်သဲစုစံ ၊သား-ဇွဲလုလင်နိုင်မိသားစု (ရန်ကုန်) - (၂ သိန်း) ကျပ်
(၁၁)မသီတာထွန်းမောင် (ရန်ကုန်) - ၄၅,၀၀၀ ကျပ်
(၁၂)ကိုကျော်သူရအောင် + မဖြိုးသန္တာ မိသားစု(ရန်ကုန်)- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၁၃)မအေးမဉ္ဇူမောင် (ရန်ကုန်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၁၄)ကိုမျိုးသွင် + မစောမြသန္တာဝင်း - ၄၂,၉၀၀ ကျပ်
(၁၅)ဦးလုံးစိန် +ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု -( ၁ သိန်း) ကျပ်
(၁၆)ကိုအောင်သန့် + မဇွန်ဇွန် (ရန်ကုန်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၁၇)ကိုရန်နိုင် + မသီတာ(မော်လမြိုင်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၁၈)မင်းကောချမ်း+ မစန္ဒာအောင်၊သား-မင်းကွန်းချမ်း မိသားစု(မော်လမြိုင်)- (၁ သိန်း) ကျပ်
(၁၉)ဦးချစ်ထွန်း +ဒေါ်အိနန် တို့အားရည်စူး၍ မစန်းစန်းခိုင်(စင်္ကာပူ)-၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၀)ဒေါ်စိန်ရီ မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၁)Jasmine Phyu - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၂)Aye Myat Khaing - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၃)Mal Thida - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၄)May - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၅)မလှလှအေး -၂၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၆)မလီလီထွေး -၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(၂၇)မမိုးမိုးနိုင်(USA) - ( ၁သိန်း)ကျပ်
(၂၈)ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ) - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၂၉)Dr.ဝေလွင်ဦး မိသားစု (ရန်ကုန်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၃၀)မမိုးမခမေ မိသားစု (ရန်ကုန်) - ( ၂ သိန်း) ကျပ် (၃၁)ဦးမျိုးကျော်စွာလွင် နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မောင်နှမများ-၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၃၂)သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း(မလေးရှား)အဖွဲ့- ၁၀၃,၀၀၀ ကျပ်
(၃၃)ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် မိသားစု (အင်းစိန်မုဒိတာအိမ်ရာ) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၃၄)မရတနာလေး (ရန်ကုန်) - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၃၅)မတင်မိုးခိုင် မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
(၃၆)ကိုမင်းစိုးသိန်း မိသားစု - ( ၂ သိန်း) ကျပ်
(၃၇)ကိုအောင်နေလင်း + မဇာဇာသက်နိုင်၊သမီးလေး-Kira ရှင်းသန့်လင်း မိသားစု(USA) - ၇၀,၀၀၀ ကျပ်
(၃၈)မသဉ္ဇာဝေမွန် - ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
(၃၉)မမူမူအောင် - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၄၀)မသီရိထွန်း -၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၄၁)မထက်ထက်အေး- ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
(၄၂)မရွှေနွယ်မင်း - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
(၄၃)ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၄၄)မအေးအေးခိုင် - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၄၅)မငြိမ်းငြိမ်းစံ - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (၄၆)" Penta-construction Co,. Ltd ( Myanmar Branch ) မှ Thilawa SEZ ဝန်ထမ်း မိသားစု " - ၂၉၁,၀၀၀ ကျပ် (၄၇)ကိုစိန်မျိုးမြင့် + မနေနေလှိုင်၊ သား-မောင်ဥက္ကာမိုးမြင့် မိသားစုမှ သားလေး--မောင်ဥက္ကာမိုးမြင့် ( ၁နှစ်)ပြည့် မွေးနေ့အလှူ - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (၄၈)ဒေါ်ကြည်ကြည်နွဲ့ ၊ ကိုဇာနည်ရဲဟိန်း၊ ကိုမြတ်ကြည်မောင်နှင့် မအေးနန္ဒာမောင် - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၄၉)Dr.ဦးမောင်လှ + ဒေါ်ခင်အေးဝင်း မိသားစု (ရန်ကုန်) - ( ၁သိန်း) ကျပ (၅၀)မခင်စုစုအောင် - ( ၁သိန်း)ကျပ် (၅၁)ဒေါ်ရီလေးပိုင် (ရန်ကုန်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (၅၂)ကိုရန်နိုင်ဝင်း + မအိစုထွေး မိသားစု(ရန်ကုန်) - ( ၁သိန်း) ကျပ် (၅၃)Dr.၀င်းမာစိုး (စင်္ကာပူ) -( ၁သိန်း) (၅၄)ဦးသိန်းဝင်း +ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (၅၅)ဦးတင်မောင်မြ +ဒေါ်တင်နီလာထွဋ် - ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (၅၆)Dr.စောထွဋ်ဦး+Dr.ချိုချိုမွှေး မိသားစု(တောင်ကြီး) - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
(၅၇)ဦးတင်မောင်+ဒေါ်တင်တင်ဝင်း(ရေနံချောင်း) - ( ၁သိန်း) ကျပ် (၅၈)မသူဇာစိုး(မော်လမြိုင်) - (၁ သိန်း) ကျပ် (၅၉)မမေဖူးပွင့်ဝေ (စင်္ကာပူ) - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၆၀)ဗိုလ်ကြီးရဲသီဟထွန်း + မမေစန္ဒာအောင်(မြစ်ကြီးနား) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၆၁)မ၀ါဝါဖြိုး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(၆၂)ဦးပြေအေး+ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၊သား-စစ်မင်းဦး မိသားစု-( ၄ သိန်း) ကျပ်
(၆၃)မသဇင်ဦး (ထိုင်း) - (၁သိန်း)ကျပ်
(၆၄)မမျိုးနေဇာ - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
(၆၅)ဧရာဝတီတိုင်း ရေဘေးအလှူအတွက် CHIN CORP MYANMAR CO., LTD. မှ ဝန်ထမ်းများမိသားစုများမှ အလှူငွေ (၄၀၂,၀၀၀ ကျပ်)
(၆၆)ကိုဖေမောင်ရှိန် + မနှင်းအိလတ် မိသားစု - ၇၀,၀၀၀ ကျပ်
(၆၇)မဟေမာမြတ်ခိုင် ၊ မနန္ဒာထွန်း (အင်္ဂလန်)- ၁သိန်းကျပ်
(၆၈)မဖူးပွင့်ဝေ ၊ မဖူးပွင့်ခိုင် -၄၀,၀၀၀ ကျပ်
(၆၉)မမျိုးလေး - ၅၀,၀၀၀ကျပ်
(၇၀)ဦးကြီးဟင်+ဒေါ်စန်းကြွယ် မိသားစု - (၅ သိန်း)ကျပ်
(၇၁)မုဒိတာ Donation group (Alor-Malaysia) (၂၁၀,၀၀၀ ကျပ်)
(၇၂) Ryobi Geotechnique International Pte Ltd(စင်္ကာပူ) မှ Aquatabs ဆေး (၁,၀၀၀လုံး) ပါ ဆေးဘူး (၂ ဘူး) နှင့် အလှူငွေ - (၇၃၅,၅၈၅ ကျပ်)
(၇၃)ကိုကျော်ဇင်ဟိန်း+မစုသက်မာဝင်း သမီးလေးဝင့်မှုးသက်ဇင် မိသားစု-
(၇၄)သမီလေး နှိုင်းထက်ဦးခင် မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ကျပ်
(၇၅)မနော်နော်ရီမွန် မှပေးပို့လှူဒါန်းငွေ - ၃၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(၇၆)မမိုးမိုးအောင် - ၆၀,၀၀၀ ကျပ်
(၇၇)မမျိုးမျိုးမော် (အိုးဝေ HR,Soluting) - ၃၂,၀၀၀ ကျပ်
(၇၈)မောင်သူမြင့် - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၇၉)ကိုဇော်ရှိန်း (စင်္ကာပူ) - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၈၀)ဦးမြင့်သိန်း - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(၈၁)မသီသီနိုင် ၊ နန်းလွင်မာဌေး - ( ၁ သိန်း) ကျပ် (၈၂)Andie Pinguin မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ - ၁၄၅,၅၀၀ ကျပ်
(၈၃)ကိုသုဝေလွင် + မပြည့်ပြည့်ဖြိုးဆွေ - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၈၄)ကိုသော်ထူးဥာဏ် - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
(၈၅)ဒေါ်ကျင်ရွှေ မိသားစု - ( ၁သိန်း) ကျပ်
(၈၆)Mr Uu Kim Poh+Mrs Team They Thuan (Singapore) - ၈၉,၀၀၀ ကျပ်
(၈၇)ကိုကျော်ဇေယျာဝင်း+မဥမ္မာမြတ်မင်း မိသားစု(USA) မှ (၂၆.၈.၂၀၁၅)နေ့တွင် ကျရောက်မည့် သားသား- Liam ထက်အာကာဝင်း မွေးနေ့အလှူ - (၁ သိန်း) ကျပ်
(၈၈)မဖြိုးမြတ်ဖြူ (USA) - ၁၂၃,၆၀၀ ကျပ်
(၈၉)ကိုညီစည်သူ + မကြည်ပြာကို မိသားစု(USA) - (၁သိန်း)ကျပ်
(၉၀)မခိုင်ခန့်သွင် မှ ချင်ပြည်နယ်ရေဘေးအတွက် လှူဒါန်းငွေ - ၁,၃၆၀,၀၀၀ ကျပ်
(၉၁)ဒေါ်ဖြူဖြူလွင် ၊ သား- Dr.သူရအေး ၊သမီး - မသူသူအေး မိသားစု(USA) - ၆၂,၅၀၀ ကျပ် ($50 ×125) (MaMMKL)
(၉၂)မအေးချစ်စံ+မသန္တာဦး (USA) - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (200 USD× 125) (MaMMKL) (MaMMKL)
(၉၃)ဦးစိုင်းစိုးမြတ် +ဒေါ်သင်းသင်းယု မိသားစု(USA) -၆၂၅,၀၀၀ ($ 500×125) (MaMMKL)
(၉၄)မရည်မွန်သန်း (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ် (MaMMKL)
(၉၅)ဒေါ်ချိုချိုဦး + သမီး- Allegra ရတနာ(ဆွဇ်ဇာလန်) - ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ် (MaMMKL)
(၉၆)မမီမီခင်လေး နှင့် USA မှ အလှူရှင်များအဖွဲ့ - ၅၃၇,၅၀၀ ကျပ်
($430 ×125) (MaMMKL)
(၉၇)မောင်မောင်ထွေး, Hwee Shou, သမီး သီတာခင်,ဂျေဂျေခင် မိသားစု(USA) - (၂ သိန်း) ကျပ် (Dr.HHYu)
(၉၈) ဒေါ်ခင်ချို မိသားစု (USA) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(Dr.HHYu)
(၉၉)ဒေါက်တာ အောင်မျိုးထွန်း(USA) - ၁၃,၀၀၀ ကျပ်(Dr.HHYu)
(၁၀၀)Dr.ထွေးထွေးယု မိသားစု (USA) - ၃၇,၀၀၀ ကျပ်(Dr.HHYu)
(၁၀၁)Andrew Lim and Marlene Lim, daughter Jessica Lim, Son Alex Lim family (USA) - (၂ သိန်း) ကျပ်(Dr.HHYu)
(၁၀၂)Lucy Lim (USA) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (Dr.HHYu)
(၁၀၃)Meng Sio(a)Aung myint(wife)Hong Youk Po(Sons)Williams Sio and Donald Sio Family(USA) (၂ သိန်း )ကျပ် (Dr.HHYu)
(၁၀၄)ကိုတင့်ကို (USA) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (Dr.HHYu)
(၁၀၅)ဦးတင်ဝင်း+ ဒေါက်တာရီရီအေး (USA) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ်(Dr.HHYu)
(၁၀၆)ကိုအဲကပရု (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ်
(၁၀၇)ဦးသိန်းဇော် + ဒေါ်သင်းသင်းမြိုင် မိသားစု(အေ၀မ်းခြံ)- ( ၂သိန်း)ကျပ်
(၁၀၈)ကွယ်လွန်သူမောင်လေး တပ်ကြပ် ဖြိုးသီဟ(၆)လပြည့်အလှူ - ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
(၁၀၉)ကိုမျိုး Bo Hlaing နှင့်အဖွဲ့ (မလေးရှား) - ၃၈၀,၀၀၀ ကျပ်(Bo Hlaing)
(၁၁၀)ဗိုလ်ကြီးတေဇာအောင်+ဒေါ်ပွင့်သိဂီင်္ ၊သမီးလေး- အိမ့်မှူးတေဇ ၊သက်မှူးတေဇ မိသားစု- ၁၀၅,၀၀၀ ကျပ် (၁၁၁)Prof; Dr. Ryo Hasegawa (Japan) -90,000 Kyats
(၁၁၂) ကိုထိန်လင်းဦး + မနိုင်ပပ (ရန်ကုန်) - 50,000 Kyats
(၁၁၃)ကိုဇင်ကိုဦး - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် ---------------------------------------------------------------------
မြန်မာပြည်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = (၁၀,၆၁၂,၀၅၈ ကျပ်) --------------------------------------------------------------------
Zin Myat Soe (ဂျပန်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းသောစာရင်း-
၁၊၊ မမျိုးလေး - ယန်း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ ကိုလင်းထက်အောင်+မခင်ဖူးဝေ -ယန်း ၁၀၀၀၀
၃၊၊ စေတနာရှင်မိသားစု -ယန်း ၁၀၀၀၀
၄၊၊ မဝါဝါထွန်း - ယန်း ၅၀၀၀
၅၊၊ကိုကျော်ဖြိုးနိုင်+မနှင်းလွင်စိုး- ယန်း ၅၀၀၀
၆၊၊ မပိုးပွင့်ဖြူ ယန်း- ၅၀၀၀
၁၀၊၊မသင်းသင်းနိုင် - ၁သိန်း.
(၃.၈.၂၀၁၅)ပထမအကြိမ် လွှဲငွေစုစုပေါင်း- (၇သိန်း)ကျပ်
၁၊၊ကိုဇေမင်းထွန်း ယန်း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ကိုဆန်နီ+မနွေနွေလင်း ယန်း ၂၀၀၀၀
၃၊၊မနိုင်နိုင်မော် ယန်း ၅၀၀၀
၄၊၊ကိုယံလင်းထွန်း+မအေးသီတာမျိုးမောင် သား လင်းမင်းမြတ်မောင် ယန်း ၁၀၀၀၀
၅၊၊ဦးသန်းဝင်း ယန်း ၂၀၀၀
၆၊၊ကိုဇေယျာလင်း+မနွေးနွေးထက် သား ဇွဲထက်လင်း လင်္ဏလင်း ယန်း ၃၀၀၀
၇၊၊ မစောလှနွယ် ယန်း ၂၃၀၀၀
၈၊၊ကိုရဲမျိုးသွင် ယန်း ၃၀၀၀
၉၊၊金関さん ယန်း ၅၀၀၀
၁၀၊၊ကိုကျော်ဇေယျ+မဇင်သူထက် ယန်း ၅၀၀၀
၁၁၊၊ကိုနေဇော်လတ်+မမြကေသွယ် သား သူရိန်သစ် ဆန်းသုခဇော် ယန်း ၅၀၀၀
၁၂၊၊ကိုအောင်တင်ဦး+မဆွေမူအောင် သမီးလေး မခင်မေအောင် သားငယ် မောင်သစ်မင်းသာ ယန်း ၁၀၀၀၀. ၁၃၊၊ကိုကောင်းမြတ်+မနန်းခမ်းကင်း သမီးလေး နန်းဟေမာန်အေးမြတ် ယန်း၅၀၀၀ ၁၄၊၊ကိုစိုင်းစံပ ယန်း ၅၀၀၀
၁၅၊၊ကိုသန်းစိုးအောင်+မနီလာအောင် သား ကောင်းသုတဥာဏ် ယန်း ၅၀၀၀. ၁၆၊၊ စေတနာရှင်မိသားစု ယန်း ၁၀၀၀
၁၇၊၊ စေတနာရှင်မိသားစု ယန်း ၁၀၀၀၀
ဒုတိယအကြိမ် လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း (ယန်း ၁၂၇၀၀) - ၁,၂၇၀,၀၀၀ ကျပ်
Ei Swe မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 20590NT$
(ထိုင်ဝမ်)နှင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယကာမများ - 300,000ကျပ် (7800NT$)
2.ကိုမျိုးအောင်+မအိဆွေမြင့် မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 30,000ကျပ် (780NT$)
3.Annie Lee (ထိုင်ဝမ်)- 20,000ကျပ် (520NT$)
4.ဦးမောင်လှ+Yinmay chan မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 10,000ကျပ် (260NT$)
5.ဂူဂူး (ထိုင်ဝမ်) - 100,000ကျပ် (2650NT$)
6.ဦးကြင်ဆိုင်+ဒေါ်ဝါ၀ါ သားမောင်သန့်စင်ဦး မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 30,000ကျပ်
7.ဦးစန်းမောင်မောင်လေး+Carol Wang သား Kevin သမီး LuLu မိသားစု
(ထိုင်ဝမ်) - 100,000ကျပ် (2600NT$)
(ထိုင်ဝမ်)နှင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယကာမများ - 100,000ကျပ် (2600NT$)
9.မန္တလေးသဘာဝဓမ္မရိပ်သာကျောင်းမှ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ - 100,000ကျပ်
Hnin Wut မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း=28700NT$
10.ကိုဇော်နိုင်ထွန်း+မယုယုခိုင် သား မောင်မင်းသန့်ကျော် မိသားစု - 50,000ကျပ်
11.Dr.စိုးညဏ် (ထိုင်ဝမ်) - 120,000ကျပ် (3120NT$)
12.ဒေါ်ခင်အေးယု မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 40,000ကျပ် (1040NT$)
13.ဦးစင်စိန်+ဒေါ်မျိုး မိသားစု (မိဘမေတ္တာ အုတ်သဲကျောက်ဘိလပ်မြေရောင်းဝယ်ရေး) - 115,000ကျပ် (3000NT$)
14.ဦးဟိန်စံ+ဒေါ်လှရင် မိသားစု - 310,000ကျပ် (8060NT$)
15.ကိုကျော်ဝင်း+မအေးစု မိသားစု - 100,000ကျပ် (2600NT$)
16.楊進德 先生 (Taiwan) - 115,000ကျပ် (3000NT$)
17.ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် သား မောင်မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု
(ထိုင်ဝမ်) - 60,000ကျပ် (1560NT$)
18.Huang Cheng Hsien+Lu Yun Ping and Daughters Huang Chu Jung ,
Huang Yu Ting (Taiwan) - 40,000ကျပ် (1040NT$)
19.陳黃菊華 女士 - 3000NT$
20.巫憲忠+陳淑凌 - 1000NT$
Vivienne Pan မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 3900NT$
21.ကိုဇော်မင်းဦး+မခင်ချိူဝင်း မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 100,000ကျပ် (2600NT$)
22.ကိုသိန်းဆွေ+မနန်းခမ်းဦး မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - 50,000ကျပ် (1300NT$)
Carol Wang မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း=10200NT$
23.羅桂香 - 500NT$
24.王麗麗 - 500NT$
25.蘇金鑽 - 500NT$
26.鐘玉青 - 200NT$
27.曹建生 - 500NT$
28.梅小女 - 500NT$
29.羅瑞德 - 500NT$
30.Mor Jocker Leo (သန်းနိူင်ဦး) - 1000NT$
31.Sine Ngal (ငယ်ငယ်) - 1000NT$
32.ကိုစည်သူ+မပုံ့ပုံ့ သား-သားစည်သူ မိသားစု - 1000NT$
33.အားဟိုင် - 1000NT$
34.ကိုဖြိုးနှင်းသူငယ်ချင်းများ - 3000NT$
高成芬 မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 27800NT$
35.吳錫仁+吳麗珠 မိသားစု - 2600NT$
36.Four Sisters အဖွဲ့ - 5200NT$
37.張鴻琴 မိသားစု - 1300NT$
38.張國琴 မိသားစု - 1300NT$
39.楊順在 မိသားစု - 1300NT$
40.尹秀妍 မိသားစု - 1300NT$
41.周興龍 မိသားစု - 2600NT$
42.林國棟+秦雅燕 မိသားစု - 1300NT$
43.趙天壽+မခင်ခင်ကြည် မိသားစု - 2600NT$
44.林文山+ဒေါ်သင်းသင်းမာ မိသားစု - 2600NT$
45.王定雲 - 1300NT$
46.ဦးကျော်ဌေး+ဒေါ်တင်တင်ဝင်း(高成芬)မိသားစု - 2600NT$
47.ဒေါ်တင်တင်မိုးမိသားစု - 500NT$
48.မသန်းသန်းစိန် မောင်နှမတစု - 1300NT$
Fongchu Lee မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 7800NT$
49.Denny Hou+Vicky Chu မိသားစု - 2600NT$
50.Hou Lydia 侯香美 မိသားစု - 2600NT$
51.Tsou hui hsia 鄒慧霞 - 2600 NT$
Kyue Lay မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း = 26600NT$
52.ကိုဝင်းလှိုင် - 2000NT$
53.ကိုအောင်နိုင် - 2000NT$
54.ကိုကြူးလေး - 1000NT$
55.ကိုထွန်း - 1000NT$
56.ကိုပိုင် - 1000NT$
57.အမေ့မေတ္တာညီအမ - 1500NT$
58.ရှောင်မာ - 1000NT$
59.အကွမ်း - 200NT$
60.တရုတ်ကြီး - 200NT$
61.Eကာဖီး သူဠေး - 500NT$
62.ပြောင်ကြီး - 200NT$
63.ကိုလှဟန် - 500NT$
64.ကိုကျော် - 200NT$
65.ကိုချန်လှိုင် - 500NT$
66.ကိုဆင်ကြီး - 1000NT$
67.ကိုသန်းလင်း မိသားစု - 1000NT$
68.ကိုတင်အောင် - 1000NT$
69.ကိုလှရွှေ - 500NT$
70.ကိုကျော်ကျော် - 500NT$
71.အန်ကယ်ကြီး - 500NT$
72.ချင်း - 500NT$
73.မခင်မြိုင် - 500NT$
74.အမည်မသိ - 500NT$
75.ကိုနိုင်ဝင်း - 500NT$
76.ဒေါ်သန်းဦး - 1000NT$
77.ကိုငြိမ်းချမ်း - 500NT$
78.ကိုကျော်ကျော် - 1000NT$
79.ကိုမောင်ကြီး - 300NT$
80.ကိုနောင်နောင် - 300NT$
81.အချွမ် Boss - 2600NT$
82.ကိုထွေး - 1000NT$
83.အကျိပြုံးရီ - 1600NT$
(ထိုင်ဝမ်ဒီပဓမ္မဒေသနာ ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့) Ko Too
မှကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 83400NT$
84.Dr.မောင်မောင်ဝင်း မိသားစု - 15000NT$
85.ကိုအောင်ကျော်လင်း မိသားစု - 6000NT$
86.ကိုမောင်မောင်ဟန် - 5000NT$
87.Sai Mook Hsam+Hsu Bao Bao - 3000NT$
88.ကိုသိန်းဝင်း - 3000NT$
89.Dr.စိုးအောင် - 3000NT$
90.陳羡花 - 3000NT$
91.Dr.သန်းသန်းမေ - 2000NT$
92.Dr.ခင်သန်းနွဲ့ - 2000NT$
93.Dr.မျိုးမြတ်သူ - 2000NT$
94.ကိုသန်းလွင် - 2000NT$
95.Dr.မီမီအောင် - 2000NT$
97.မစီ နှင့်သူငယ်ချင်းများ - 1400NT$
98.ကိုတူး - 1100NT$
99.Dr.ရီရီစိန် - 1000NT$
100.Dr.နီလာအေး - 1000NT$
101.Dr.ဆန်းဆန်းဝေ - 1000NT$
102.မတင်ဇာဖြူ - 1000NT$
103.မအေးအေးမြင့် - 1000NT$
104.မမြမြအေး - 1000NT$
105.ကိုဇော်အောင်+မမြင့်မြင့်သိန်း - 1000NT$
106.ကိုရီခင် - 1000NT$
107.ကိုတင်အေး+မအလိန်း မိသားစု - 1000NT$
108.ကိုစန်းယုဝင်း - 1000NT$
109.Albert Win Ko+Hsu Li Li - 1000NT$
110.許麗珍 蔡志聖 - 1000NT$
111.ဒေါ်တင်တင်ရီ - 1000NT$
112.ကိုဇော်ဝင်း+မစန်းစန်းလှ - 1000NT$
113.မအေးအေးလှ မိသားစု - 1000NT$
114.ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်မေမြင့်ခင် - 1000NT$
115.Dr.စန္ဒာအေး (HongKong) - 1000NT$
116.ဒေါ်ကျင်လှ နှင့် မိသားစု - 1000NT$
117.ကိုအာလူး - 900NT$
118.အာချန် - 600NT$
119.ကိုခင်မောင်အေး - 500NT$
120.ကိုကျော်ကျော်+မကြေးကြေး (မောင်အားစန်း စားသောက်ဆိုင်) - 500NT$
121.ကိုသီဟ - 500NT$
122.ကိုဟန်တင် - 500NT$
123.ဦးဟိန်း - 500NT$
124.ကိုစိုးလွင် - 500NT$
125.ကိုသိန်းအေး - 500NT$
126.မခင်ခင်နွဲ့ - 500NT$
127.မစပယ် - 500NT$
128.ဒေါ်ငွေကြည် - 500NT$
129.မ၀င်းဝင်းကြူ - 500NT$
130.ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး - 500NT$
131.ကိုကျော်သောင်း+မ၀င်းဝင်းမြင့် - 500NT$
132.ကိုအောင်မြင့်+မကျင်ငွေ - 500NT$
133.ကိုမြင့်သိန်း - 500NT$
134.ကိုဇော်ကြီး - 500NT$
135.ကိုတီတီး - 500NT$
136.မကြူးကြူး- 500NT$
137.မတင်တင်ဝင်း - 500NT$
138.ဦးစင်ဟုတ် - 500NT$
139.မောင်ကောင်းထက်ဇေ - 500NT$
140.မထွေးလင်း - 300NT$
141.ကိုသိန်းမြင့် - 300NT$
142.လိုက်စစ်လုံ - 300NT$
143.ကိုကျော်ဝင်း - 300NT$
144.ကိုအာကာလူး မိသားစု - 200NT$
------------------------------------------------------------------- (Ps.ဆက်သွယ်လှူဒါန်းငွေလွှဲပြီး ဖြစ်ပါသော်လည်း အလှူရှင်စာရင်းတွင် မပါဝင်သေးပါက Comment တွင်ရေးသားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။)
------------------------------------------------------------------ စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်များပေးပို့လှူဒါန်းငွေ
မနှင်းယုယုဝင်း - $2536 +မစုငယ်ဝင်း - Total 10714 = S$ 13250
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats) = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ ကျပ်
----------------------------------------------------------------- USA မှ အလှူရှင်များပေးပို့လှူဒါန်းငွေ
မဟန်စုယဉ် နှင့် ဖလော်ရီဒါမြန်မာအလှူရှင်များ(USA)မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း - ၄,၀၇၄,၂၀၀ ကျပ်
××××××××××××××× ဦးအောင်သန်းညွန့် (မလေးရှား)မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း - ၇,၃၂၇,၀၀၀ ကျပ်
(ခုနှစ်ဆယ့် သုံးသိန်း နှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်ကျပ်တိတိ)
1.မအိဆွေမြင့် ၊ Dr.နှင်းဝတ်ကြည်(ထိုင်ဝမ်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း(ပထမအကြိမ်)- ၁၃၅,၀၀၀ ကျပ်
2.မအိဆွေမြင့် ၊ Dr.နှင်းဝတ်ကြည်(ထိုင်ဝမ်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း(ဒုတိယအကြိမ်) - ၈,၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ရှစ်ဆယ့်နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ) (11/8/2015)
3.မအိဆွေမြင့် ၊ Dr.နှင်းဝတ်ကြည်(ထိုင်ဝမ်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း(တတိယအကြိမ်)-၂,၃၆၅,၀၀၀ ကျပ်(28/8/2015)
ထိုင်ဝမ်မှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပေးပို့ လှူဒါန်းငွေစုစုပေါင်း
မဇင်မြတ်စိုး(ဂျပန်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း - (၁,၉၇၀,၀၀၀ ကျပ်)
1.ပထမအကြိမ် (ကိုမျိုးကြီး ပန်းပျိုးသူ- မန္တလေး) - ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကောလင်း+ပွင့်ဖြူရေဘေး)
2.ဒုတိယအကြိမ်(Dr.သန်းထွန်း-စစ်ကိုင်း) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (စစ်ကိုင်းတိုင်း-၀က်လက်မြို့နယ်)
3.ကိုကြီးနှင့် မိတ်ဆွေမောင်နှမများအဖွဲ့(ပွင့်ဖြူ) - ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ပွင့်ဖြူ +စေတုတ္တရာ)
4.ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတလူငယ်များအဖွဲ့- ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ရခိုင်ပြည်နယ် -မြောက်ဦး)
Radana Moe 5.Future Youth (Ye Hein) - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ရခိုင်ပြည်နယ်-သံတွဲ )
6.ရှေးရေစက်ပရဟိတအဖွဲ့(မန္တလေး)Shin Mon - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (စေတုတ္တရာ/ပွင့်ဖြူ )
7.Heart to Heart Donation Group (Yp Phyo) - ၁,၀၅၃,၀၀၀ ကျပ်(ပွင့်ဖြူ / ဇလွန် )
(ဆန်အိတ် ၄၅ အိတ်အလှူ × ၂၃,၄၀၀ ကျပ်)
8.Online ပရဟိတအဖွဲ့ (Aung Soe Oo) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
9.ကိုကြီးနှင့် မိတ်ဆွေမောင်နှမများ(ဒုတိယအကြိမ်)- ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ဧရာဝတီတိုင်း)
10.(၁၀ကြိမ်)မြောက်အလှူ (ကိုမျိုးကြီး ပန်းပျိုးသူ ) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (လက်ပန်းတန်း) 11.(၁၁ကြိမ်)မြောက်အလှူ (Dr.Nanda Win) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ဧရာဝတီတိုင်း၊အင်္ဂပူ) 12.ကိုကြီးနှင့် မိတ်ဆွေမောင်နှမများ(တတိယအကြိမ်)- ၇,၃၂၇,၀၀၀ ကျပ်
13.ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတလူငယ်များအဖွဲ့- ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ချင်းပြည်နယ်)
Radana Moe ------------------------------------------------------------------------------------------------
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား လှူဒါန်းပြီးငွေ စုစုပေါင်း = ၂၈,၃၈၀,၀၀၀ ကျပ်
14.ကိုကြီးနှင့် မိတ်ဆွေမောင်နှမများအဖွဲ့ - ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ဧရာဝတီတိုင်း)(4/9/2015)
(တစ်အိမ်ထောင် ၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အိမ်ထောင်စု၁၀၀ အတွက်လှူဒါန်းပါသည်။)
15.ကိုမျိုးကြီး (ပန်းပျိုးသူ) အဖွဲ့ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ချင်းပြည်နယ်) (4/9/2015)
(တစ်အိမ်ထောင် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အိမ်ထောင်စု၁၀၀ အတွက်လှူဒါန်းပါသည်။)
16.အွန်လိုင်းလေထန်ကုန်းအဖွဲ့ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ဧရာဝတီတိုင်း) (4/9/2015)
17.ကိုမျိုးကြီး(ပန်းပျိုးသူ) - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်(28/9/2015)
18.ကိုစိုး(မနောကြာဖြူ ) - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (2/10/2015)
(ချင်းပြည်နယ် ဆိုလာမီးပြားအလှူ )
19.ကိုကြီးနှင့် ပရဟိတမိတ်ဆွေများ - ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်(13/10/2015) (ကယားပြည်နယ်အလှူ)
(13/10/2015)နေ့အထိ လှူဒါန်းပြီးအလှူငွေစုစုပေါင်း= ၃၈,၉၈၀,၀၀၀ ကျပ်
(28/9/2015)နေ့အထိ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း = ၄၆,၄၇၅,၇၅၈ ကျပ် (13/10/2015)နေ့အထိ လှူဒါန်းပြီးအလှူငွေစုစုပေါင်း= ၃၈,၉၈၀,၀၀၀ ကျပ် --------------------------------------------------------------------------- လက်ကျန် အလှူငွေ စုစုပေါင်း = ၇,၄၉၅,၇၅၈ ကျပ်
အလှူရှင်များအားလုံးကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်လျှက်-
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း​ (၆ နှစ်)ပြည့် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲအတွက် နတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက်ဆွမ်းအလှူရှင်များနှင့် အလှူရှင်များမှတ်တမ်း(၂၀၁၅)
မင်္ဂလာပါရှင်-၂၀.၉.၂၀၁၅(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း (၆) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲအဖြစ် သံဃာအပါး(၁၀၀၀)အား နတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက်ဆွမ်း လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အလှူရှင်များ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ ယခု သံဃာတော် (၁၀၀၆ ပါး) စာအတွက် ဆွမ်းအလှူငွေ -၂,၅၁၅,၀၀၀ ကျပ် (နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း တစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်) လက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်ပါသောကြောင့် ဆက်လက်လှူဒါန်းလိုကြသော စေတနာရှင်အလှူရှင်များအနေနှင့် မိမိတို့စေတနာသဒ္ဓါပေါက်သည့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိုင်ကြသလို အောက်ဖော်ပြပါ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများအတွက် ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း ကုသိုလ်အကျိုးမျှော်၍ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။လှူဒါန်းနိုင်ရန်-××××××××××(၁)ဗလာစာအုပ် - (တစ်အုပ် - ၂၀၀ ကျပ်)(၂)ဘောလ်ပင် - (တစ်ချောင်း - ၁၅၀/၂၀၀ ကျပ်)(၃)ဆပ်ပြာမှုန့်ထုတ်(သေး) - (တစ်ထုတ်လျှင် - ၁၀၀ ကျပ် /၂၀၀ ကျပ် )(၄)ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာခဲ - (တစ်ခဲ - ၂၀၀ ကျပ်/၃၀၀ ကျပ်)(၅)ခေါင်းရိတ်ဒါ။ - (တစ်ဘူးလျှင် - ၂၀၀ ကျပ်) (၆)သင်္ကန်းကြီး - ၂၅,၀၀၀ ကျပ်(စာရေးတံမဲ ဖောက်ပေးရန်)(၇)သင်္ကန်းလတ် - ၁၅,၀၀၀ ကျပ်(စာရေးတံမဲ ဖောက်ပေးရန်)(၈)ထီး - ၆,၀၀၀ ကျပ် (စာရေးတံမဲ ဖောက်ပေးရန်)(၉) ဖိနပ် - ၆,၅၀၀ ကျပ်(စာရေးတံမဲ ဖောက်ပေးရန်)နတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက် အလှူရှင်များမှတ်တမ်း-××××××××××××××××××××××××××(၁)ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏ် +ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီးလေး- မေမြတ်နိုးခိုင် မိသားစု - ၁၁၂,၅၀၀ ကျပ် ( သံဃာတော် ၄၅ ပါးအတွက်)(၂)ကိုသက်နိုင်ဦး + ဒေါက်တာနှင်းဝတ်ကြည် ၊သား-မောင်မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ( သံဃာတော် ၁၂ ပါးအတွက်)(၃)ဒေါ်ခင်မာလာမောင် - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၂၀ ပါးအတွက်)(၄)မသီရိဟေမာန်ကျော် (USA) - ၇၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၃၀ ပါးအတွက်)(၅)Drသန်းထွန်း+ဒေါ်မိုးမိုး (သား)မောင်ထက်ဦးဝေယံ သမီး မမေသစ္စာခင် မိုးထက်ပါရမီ မိသားစု မြင်းမူမြို့ - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော် ၂၀ ပါးအတွက်)(၆)Dr.ထိန်ဝင်း+Dr.နှင်းအေးယဉ် (ရန်ကုန်)- ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၇)မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား) - ( ၁သိန်း) ကျပ် (သံဃာတော် ၄၀ ပါးအတွက်) (၈)မမူမူမောင် (ဒူဘိုင်း) - ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၅၀ပါးအတွက်)(၉)ကိုလှသန်းမိုး+မစောသွယ်အေး(စင်္ကာပူ) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၀)ကိုကျော်မင်းထွန်း+မယုသိန်း မိသားစု (ထိုင်း) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၂၀ပါးအတွက်)(၁၁)မငုဇာခိုင် (စင်္ကာပူ) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၂)ဦးအောင်စွမ်း +ဒေါ်ခင်တုတ် မိသားစု - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၃)ကိုမျိုးအောင်+မအိဆွေမြင့် ၊သား- မောင်ကောင်းထက်နိုင်၊သမီး -မယွန်းရွှေရည် မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၄)မအိမွန်မွန် (စင်္ကာပူ) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၅)Dr.တင့်ဆွေ+ဒေါ်မြမြအေး (အင်ဒီယာနာပိုးလစ်မြို့ ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၆)ကိုမင်းထွေး+မရွှေလမင်း (မန္တလေး) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၇)ကိုမျိုးမြင့်အောင် + မစုမွန်ဌေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၈)ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၁၉)မသဲစုမွန် - ( ၁ သိန်း) ကျပ် (သံဃာတော်အပါး ၄၀ အတွက်)(၂၀)Steven + Amy (Singapore) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၂၀ပါးအတွက်) (၂၁)Mr.& Mrs.Argus Ang Wei Kwang family - ၂၅၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော် ၁၀ပါးအတွက်)(၂၂)နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးကျော်ကျော်+ဒေါ်ချိုချိုစန်း (YNTZ Car Sales Centre) မိသားစု - ၁,၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော်အပါး ၅၀၀ အတွက်)(၂၃)နှစ်ဖက်မိဘ များအမှူးထား၍ ကိုရဲဝင်းနိုင်..မဟန်စုယဉ် (USA) - ၁၁၂,၅၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၄၅ပါးအတွက်)(၂၄)ဦးတွတ်ဒေါ်သန်းသန်းဌေးမိးသာစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော် ၁၂ ပါးအတွက်)(၂၅)ကိုရဲဇေယျရှိန်+ မမီမီလွင်မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော် ၁၂ ပါးအတွက်)စင်္ကာပူ×××××(၁)ကိုဇော်လင်းနိုင် + မဥမ္မာသန့် (စင်္ကာပူ) - ၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၂)မရီရီမြိုင် (စင်္ကာပူ) -၂၅,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၁၀ ပါးအတွက်)(၃)မသင်းလဲ့ရည်မောင် (စင်္ကာပူ) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သံဃာတော် ၂၀ပါးအတွက်)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××စုစုပေါင်း လက်ခံရရှိငွေ = ၂,၅၄၀,၀၀၀ ကျပ်(သံဃာတော် ၁,၀၁၆ ပါး × ၂,၅၀၀ ကျပ်)-------------------------------------------------------------------------------သင်္ကန်း+ထီး+ဖိနပ်အလှူရှင်စာရင်း-×××××××××××××××××××××××(၁)ဆရာတော် ဒေါက်တာဝဏ္ဏိတ (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ) ( တောင်သာမြို့နယ် ပုဒါတ်စာကုန်းကျေးရွာ) မှ သင်္ကန်း (၁၀ စုံ) လှူဒါန်းပါမည်။ (၂)ကိုကျော်မင်းထွန်း+မယုသိန်း မိသားစု (ထိုင်း) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သင်္ကန်းကြီး ၂စုံ)(၃)ကိုအေးချမ်းအောင်+မဖြူသီဟန် မိသားစု(A5 သောက်ရေသန့်) - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သင်္ကန်းကြီး ၁၀ စုံ)(၄)ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု - ၇၀,၀၀၀ ကျပ်(သင်္ကန်းကြီး၁ စုံ× ၂၅,၀၀၀ ကျပ် + သင်္ကန်းလတ် ၃ စုံ×၁၅,၀၀၀ကျပ်)(၅)ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်ထားထားခိုင်အား ရည်စူး၍ သမီး-မဖြိုးဝေခိုင်(ရန်ကုန်) - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (သင်္ကန်းကြီး ၁၀ စုံ×၂၅,၀၀၀ ကျပ်)(၆) ဦးကျော်စိုး+ ဒေါ်တင်တင်ငြိမ်း သား ကိုကျော်မင်းထက် မိသားစု- ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ်(ထီး ၁၀ လက်×၆,၀၀၀ ကျပ် + ဖိနပ် ၁၀ ရံ× ၆,၅၀၀ ကျပ် ) (၇)ကိုမျိုးသွင်+ မစောမြသန္တာဝင်း - ( ၁သိန်း) ကျပ်(သင်္ကန်းကြီး ၄ စုံ)(၈)နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးကျော်ကျော်+ဒေါ်ချိုချိုစန်း (YNTZ Car Sales Centre) မိသားစု -၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်(သင်္ကန်းကြီး ၁၀ စုံ )ဆပ်ပြာမှုန့် +အထွေထွေ အလှူရှင်-×××××××××××××××××××××××(၁)မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား) - ( ၁သိန်း) ကျပ် (၁၀၀ ကျပ်တန် ဆပ်ပြာမှုန့် အထုတ် ၁၀၀၀ လှူဒါန်းပါမည်။)(၂)ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု - ၄၀,၀၀၀ ကျပ်(ဆပ်ပြာမှုန့် ၁၀၀ ကျပ်×၁၀၀ +ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာ ၂၀၀ ကျပ်×၁၀၀+ခေါင်းရိတ်ဓါး ၂၀၀ ကျပ်×၅၀)န၀ကမ္မအလှူငွေ×××××××××××(၁)ဦးအောင်စွမ်း+ဒေါ်ခင်တုတ် မိသားစု - (၁၀ သိန်း) ကျပ်(သံဃာတော်တစ်ပါးလျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်× အပါး ၁၀၀၀)(၂)ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု - ၁၃,၀၀၀ ကျပ်ဗလာစာအုပ်+ ဘောလ်ပင်အလှူရှင်များ-××××××××××××××××××××××××(၁)တော်ဝင်မြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီ မှ ဗလာစာအုပ် (၁၀၀၀) လှူဒါန်းပါမည်။(၂)မငုဇာခိုင် (စင်္ကာပူ) - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်(ဗလာစာအုပ်၂၀၀ ကျပ်× ၁၀၀၀ + ဘောလ်ပင် ၁၅၀ကျပ်×၁၀၀၀)(၃)ကိုအောင်နေလင်း+ မဇာဇာသက်နိုင် သမီး Kira ရှင်းသန့်လင်းမိသားစု (USA) - (ဘောလ်ပင် ၁၀၀ ကျပ် × ၂၀၀ )(၄)ကိုမျိုးမြင့်အောင် + မစုမွန်ဌေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်(ဘောလ်ပင် ၂၀၀ ကျပ်× ၁၀၀)(၅)ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု - ၂၇,၀၀၀ ကျပ်(စာအုပ် ၂၀၀ကျပ်× ၆၀+ ဘောလ်ပင် ၁၅၀ကျပ်×၁၀၀)
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်- ×××××××××××××× (၁)ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း (Ph- 09402777916) Nan War War Mg ငွေလွှဲရန်- KBZ (Yankin) 127-501-00200276901 AYA Bank(WZT) - 0082223010001559 (၂)မစုငယ်ဝင်း (စင်္ကာပူ) Su Nge Win (၃)မမြရည်ညို (စင်္ကာပူ) Mya Yee Nyo (၄)မရွှန်းလဲ့မေ (စင်္ကာပူ) Dora May (၅)မဇင်မြတ်စိုး (ဂျပန်) Zin Myat Soe (၆)ဒေါက်တာနှင်းဝတ်ကြည် (ထိုင်ဝမ်) Hnin Wut (၇)ဒေါက်တာထွေးထွေးယု(USA) Htwe H Yû (၈)ကိုမင်း (ထိုင်း) Ko Min (၉) ကိုဇော်မြင့် (မန္တလေး) Ko Zaw Myint လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်လျှက်-
၂၀၁၅ မြန်မာပြည်အ၀ှမ်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များမှတ်တမ်း(လက်ခံရရှိငွေ ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ ကျပ် )
1.မြန်မာပြည်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၁၀,၅၆၂,၀၅၈ ကျပ် 2.စင်္ကာပူမှ လက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်း = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ ကျပ်
(၂၈.၉.၂၀၁၅)နေ့အထိ လက်ခံရရှိငွေပေါင်း = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ ကျပ်
Nan War War Mg လက်ခံရရှိသော အလှူငွေများစာရင်း (၁) နန်းဝါ၀ါမောင် နှင့် ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူ မောင်နှမများအဖွဲ့-
မြန်မာပြည်မှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = (၁၀,၅၆၂,၀၅၈ ကျပ်) --------------------------------------------------------------------
မစုငယ်ဝင်း (စင်္ကာပူ) လက်ခံရရှိသော အလှူငွေစာရင်း Su Nge Win
(1). မဇင်မင်းရွှေ - S$113
(2). ကိုရဲကျော်+မစန္ဒီ - S$113
(3). ကိုမြစိုးသူ + မသီတာထွန်း - S$50
(4). မမြတ်သဒ္ဓါကြည် ၊ မမြတ်သော်တာဆန်း - S$20
(5). ကိုအောင်နိုင်စိုး နှင့်အဖွဲ့ - S$340
(6). မခင်မြ၀င်း - S$40
(7). ကိုညီညီလွင် - S$100
(8). မရီရီမြိုင် - S$50 (9). ဒေါ်တင်တင်အေး မိသားစု - S$50 (10). ကိုတေဇာ - S$50 (11). မသင်းစုစုအောင် - S$30 (12). ကိုဇော်လင်းနိုင် + မဥမ္မာသန့် - S$100
(13). ကိုအံ့ထူးနိုင် + မနှင်းယုလွင် - S$113
(14). ကိုအောင်ဇော်မင်းသွင်+မတင်အေးဇင် - S$ 50
(15). မခင်မျိုးသန့် - S$113
(16). မဇင်မာအောင် - S$50
(17). မခင်သီရိ - S$50
(18). ကိုဝင်းသန်းလှိုင် - S$50
(19). မစိုးဆင့် - S$30
(20). မ၀ါနု - S$50
(21). ကိုစိုးစံဝင်း - S$50 (22). မအိမွန်မွန် - S$100 (23). ဦးချစ်သောင် + ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန် - S$40
(24). ကိုငြိမ်းချမ်းသူ + မ၀င်းလဲ့လဲ့အောင် - S$40
(25). မစုရည်လင်း ၊ မမေငြိမ်းချမ်း - SS20
(26). ကိုသီဟရဲတင့် + မအေးမာလာထွန်း - S$113 (27). ကိုကျော်လွင် + မခင်စန္ဒာ - S$30
(28). မယုယုကြည် - S$50
(29). ကိုဇော်မင်းလွင် - S$100
(30). မသင်းသင်းသူ - S$50
(31). မခိုင်ဇင်ဝင်း - S$50
(32). မမျိုးမာလာမြင့် - S$50
(33). မဝါဝါဝင်း - S$30
(34). မအေးအေးဆန်း - S$113
(35). ကိုသဲကိုကို + မ၀င်းဝင်းမော် - S$100
(36). ကိုကျော်ဇင်လင်း + မချိုအေးသန့်စင် - S$30
(37). ကိုကျော်ဇင်ထွန်း + မမြင့်ကြူခိုင် (သား) သုတမင်းဇင် မိသားစု - S$50
(38). ပိုင်ဇင် - S$50
(39). စောနှင်း - S$50
(40). မနွေးနွေးအိ - S$30
(41). မသန္တာ၀င်း - S$30
(42). ကိုယာမိုးလွင် + မခင်လဲ့ရီ - S$50
(43). ကိုမျိုးဝင်းလှိုင် + မဝေနှင်းနိုင် ၊ (သမီး)မျိုးဟန်နီသော် ၊ (သား)ကောင်းခန့်ကျော် မိသားစု - S$113
(44). ကိုဇော်လေး + မစိုးစိုး - S$30 (45). ကိုရန်နောင် + မစုမွန်မောင် (သမီး) မေလဲ့မွန်နောင် မိသားစု - S$100
(46). ကိုမင်းကျော်ဇင် + မနိုင်နိုင်ဦး - S$50 (47). မမီမီစော - S$30
(48). ကိုသော်ထွန်း - S$40
(49). Shally Aye - S$111 (50). မအေးစုမွန် - S$30 (51). ဦးစိန်မြင့် + ဒေါ်မြမြသင်း မိသားစု - S$100
(52). ကိုကျော်လင်းထွန်း + မအိအိလွင် - S$100
(53). ကိုရန်ပိုင် - S$30.30
(54). မသီတာထွန်း - S$10
(55). မ၀င်းသွင်အေး - S$30
(56). မတိုးတိုးဝင်း - S$300
(57). ကိုဦး + မချယ်ရီစိုး - S$50
(58). ကိုညီညီမိုး + မသင်းသီရိစံ (သား) သန့်ညီဟိန်း - S$30 (59). မစုငယ်ဝင်း - S$30 (60). ရီမွန်(PK) – S$100
(61). ကိုမြင့်ကြိုင် + မဖြူသဲထိုက် (သား) ကောင်းထက်စံ မိသားစု - S$200 (S$981) (S$4273)
(62). ကိုကျော်ဇေယျာဝင်း + မမြူးမိုင် - S$50
(63). ကိုဇော်ရဲထွန်း + မငြိမ်းငြိမ်းအိ - S$56 (64). ကိုကောင်းမြတ် + မရတနာ - S$200
(65). ကိုမင်းအောင်နိုင်ဝင်း+မသဉ္ဇာနွယ် - S$50
(66). ကိုအာကာစိုး + မစောနှင်းမူ - S$100
(67). ဦးခင်အောင်တင် + ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု - S$150
(68). မမေသီရိမောင် - S$100
(69). မသိင်္ဂီစန်း - S$100
(70). မမင်းမင်းခိုင် - S$120
(71). ကိုရင်ပို + မမေဇင်ဦး (သမီး)အေးချမ်းပို (သား)ဥာဏ်ဝင်းထက် - S$50
(72). ကိုကျော်မျိုးထွဠ် + မနုနုအောင် (သမီး) Bridget – S$224 (73). မသင်းသင်းခိုင် - S$100
(74). မနွေးနွေးအိ - S$50
(75). ကိုဟေးဝဏ္ဏလှိုင် + မနန်းသူဇာ - S$100
(76). မစုဝေလွင် - S$50
(77). ကိုအောင်သူစိုး - S$20
(78). ကိုခွန်သန်းအောင် + မမေသွယ်ဦး - S$50
(79). အိဇာ - S$100
(80). မဖြူမာသိမ့် - S$50
(81). ကိုဝင်းညွန့် + မမြသဲဝင့် - S$50
(82). မအိမွန်ဖြိုး - S$56
(83). ဦးအောင်စွမ်း + ဒေါ်ခင်တုတ် ၊ သား-ကိုအောင်သက်ဦး ၊ ကိုဇော်ရှိန်း ၊သမီး-မမေသန္တာအောင် မိသားစု - S$1200 (84). ကိုမျိုးသက်ထွန်း - S$50
(85). ကိုရဲဝင့်အောင် + မသန္တာသွင် - S$50
(86). မစိုးမမမျိုးအောင် - S$100
(87). ဦးညွန့်ဝင်းထွန်း မိသားစု - S$50
(88). မမီမီနိုင် - S$50
(89). ကိုအောင်ကျော်ဝင်း + မသီရိမျိုးသောင်း - S$50
(90). ကိုဇော်ဇော်အောင်+ဒေါက်တာဇင်မာဝေ - S$120
(91). မသိမ့် - S$50
(92). မအေးနီလာ - S$50
(93). ကိုစိုးမင်းကျော် - S$50
(94). ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင် - S$20
(95). ကိုဟန်ဝင်းအောင် - S$20
(96). မဇင်ဇင်သူ - S$10
(97). ကိုအောင်ကိုထက် - S$30
(98). မထွေးကျင် - S$100 (99). ကိုနန္ဒ + မတိုးတိုးလွင် မိသားစု - S$100
(100). Boilermaster မိသားစု - S$480 (101). မသီတာထွန်း - S$50
(102). မထက်သီရိလွင် - S$50
(103). ကိုဇာဏီလွင် - S$100
(104). ကိုမိုးကျော်သူ + မနန္ဒာလှဆွေ - S$50
(105). ကိုနေဇော်အောင် + မလှိုင်ဝင်းလဲ့ - S$100 (106). ကိုအောင်သီဟ - S$50
(107). ကိုသူရယူစိန် - S$50
(108). Mr Simon Toh + Ms Linda Low Geok Ngoh And Ms Low Geok Hak - S$ 50 (109). ကိုချမ်းမြင့်သာ + မမိုးဦးခင် ၊ သား Noel ဇေယျာမိုးမြင့် မိသားစု - S$1000 (110). ကိုကျော်ဦး + မချယ်ရီမြင့် မိသားစု - S$50
(111). Nyan Soe Htut + May Thandar Aung Htut , Emma Thandar Htut, Ethan Soe Htut – S$100
(112). CCG & IIID Murdoch University, Australia – S$120 (113). ကိုစိုးပိုင်ထက် - S$115
(114). ကိုရဲဖုန်းသူ - S$50
(115). Mr. Nguyen Dinh Tam + Mrs Trinh Thi Lien Minh and Son Little Boy Sony (Singapore) - S$50
(116). မအေးမြတ်ခိုင် - S$50
မနှင်းယုယုဝင်း(စင်္ကာပူ) လက်ခံရရှိသော အလှူငွေစာရင်းHnin Yu Yu Win
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 1.ဦးဝင်းထွဋ်အောင်+ ဒေါ်သဉ္ဇာဝင်း သားဘုန်းပြည့်စည်သူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)$ 112 2.ကိုသိန်းမြင့်ဝင်း+မယမင်းစိုး သား Raymond Win (စင်္ကာပူ) $ 100 3.ကိုကျော်ကျော်ဦး +မခင်ချောစုဝင်းမောင်(Europe) $56 4.ဒေါ်သင်းသင်းလွင်(စင်္ကာပူ)$56. 5.ကိုဇော်လင်းအောင်+ မဇင်မာထွန်း(စင်္ကာပူ) $50 6.မသီသီရှိန်$100 7.ကိုသန်းဇော်ဝင်း + မမြတ်သူဇာ(စင်္ကာပူ)$50 8.မဆုမြတ်မိုမို (စင်္ကာပူ) $50 9.ကိုဖုန်းလွင်+မလဲ့လဲ့ရှိန်း(စင်္ကာပူ)$100 10.ကိုမျိုးမြင့်အောင် + မစုမွန်ဌေး မိသားစု(စင်္ကာပူ) $100 11.ကိုဇော်မျိုးထွဋ်+မသွယ်ဇင်ဦး(စင်္ကာပူ) $100 12.ကိုပိုင်ပြည့်ကို + မမြတ်စုလှို င် (စင်္ကာပူ) $50. 13.ကိုရဲမင်းသန်း+မနေနွယ်ဝင်း $50 14.ကိုအံ့ထူးနိုင်+မနှင်းယုလွင် $562. 15.Nydia Chuah(Singapore) $200. 16.Ong Soon Hup(Singapore) $200 17.ကိုသန်းလင်းထိုက် -မငယ်ငယ်စိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) $50 18.ကိုဝဏ္ဍ + မဝတ်ရည်ဖြိုး (စင်္ကာပူ) $100 19.မမာမာ(စင်္ကာပူ)$100 20.THADARMOESWE DONATION GROUP (Singapore & Myanmar) $100
21.ကိုမျိုးမင်းဝင်+မအေးမြတ်သီတာအောင် (စင်္ကာပူ)$50 22.ကိုသန်းကျော်ဇော + မပန်းမြတ်မြတ်(စင်္ကာပူ)$50 23.မဇာဇာအောင် (စင်္ကာပူ)$50 24. မအေးအေးခိုင် (စင်္ကာပူ)$50 25.Ms Khoo Ah Khin(Singapore)$50 Zin Myat Soe (ဂျပန်) မှ ပေးပို့လှူဒါန်းသောစာရင်း-
Ei Swe မှကောက်ခံရရှိငွေ-၁၃,၅၀၀၀ ကျပ် (ပထမအကြိမ်)
1.Li Chuan Tsou (ထိုင်ဝမ်) - ၃၅,၀၀၀ ကျပ် 2.ဦးမောင်လှ+Yinmay Chan(ထိုင်ဝမ်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
3.Fongchu Lee(ထိုင်ဝမ်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ် Ei Swe မှကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းနှင့် စာရင်း= 20590NT$ (ဒုတိယအကြိမ်)
ဒုတိယအကြိမ် အလှူငွေ စုစုပေါင်း - ( ၈,၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်) 20590NT$ --------------------------------------------------------------
Ei Swe မှကောက်ခံရရှိငွေ- ၂,၃၆၅,၀၀၀ ကျပ် (တတိယအကြိမ်)
Sis CarolWang ထံမှလက်ခံရရှိထားသောအလှူ ရှင်စာရင်း==============================1.林金蓮 - 1000NT$2.林素女 - 1000NT$3.林吳秀雄 - 500NT$4.林吳靖 - 500NT$5.詹兆浮 - 500NT$6.蔡燈燈 - 500NT$7.မောင်အောင်နိုင် - 2000NT$8.陳美蒂 မိသားစု - 500NT$9.ကိုအောင်ဖေဦး+မလဲ့လဲ့အေး - 500NT$10.ဦးဝင်းစိန် မိသားစု - 1000NT$11.မေရင်း - 500NT$Sis Helen Kao ထံမှလက်ခံရရှိထားသောအလှူ ရှင်စာရင်း=====================================1.ကိုထွေးသိန်း - 1000NT$2.劉安偉 - 1600NT$3.施小英 - 1000NT$4.高先生 - 2000NT$5.何眏緬 - 1300NT$6.劉順吉 - 1300NT$ကိုတူး (ထိုင်ဝမ်ဒီပ ထေရ၀ါဒ ဓမ္မဒေသနာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့)ထံမှလက်ခံရရှိထားသောအလှူ ရှင်စာရင်း=============================================1.ဦးကျော်ထွန်း+ဒေါ်ကျင်စိန် သားသမီးနှင့်မြေး မိသားစု - 10,000NT$2.မအေးအေးမြင့် - 6000NT$3.吳素貞 - 5000NT$4.張恩本 - 2000NT$5.Dr.နီနီအောင်- 2000NT$6.陳蕥禎 - 2000NT$7.方秀玉 - 2000NT$8.李秀燕 - 2000NT$9.黃福俊 - 1000NT$10.陳潁蓁 - 1000NT$11.ကိုရွှေလုံး - 1000NT$12.ကိုညွန့်နိုင်+Dr.ဌေးဌေးသန်း မိသားစု - 1000NT$13.ဦးရွှေတင် မိသားစု - 1000NT$14.ကိုသန်းဦး+မအေမီ သမီးလုံးလုံး မိသားစု - 1000NT$15.ကိုတူး - 1100NT$16.ဦးချော်ရှပ်ငွန်+ဒေါ်ကျင်စိန် ကိုချော်ကာကြည် မိသားစု - 600NT$ 17.ကိုအကောက်+မဝေေ၀မြင့် - 500NT$ 18.Dr.အောင်ထွန်း+Dr.နွယ်နီစိန် - 500NT$ 19.張麗華 - 1000NT$ 20.陳鳳嬌 - 300NT$ 21.ကွယ်လွန်သူ ဦးအောင်ထိန်လင်း အားရည်စူးအလှူ - 300NT$Dr.နှင်းဝတ်ကြည် ထံမှလက်ခံရရှိသောအလှူ ရှင်စာရင်း================================== 1.羅桂香、呂學懋 (Taiwan) - 1000NT$ Ei Swe လက်ခံရရှိထားသောအလှူ ရှင်စာရင်း============================ 1.မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်တင်မူ အားအမှူးထား၍သမီး မကေသွယ်စိုး(ထိုင်ဝမ်) - 1275NT$------------------------------------------------ရေဘေး အလှူငွေ စုစုပေါင်း 2,365,000 ကျပ်
ဖြစ်ပါသော်လည်း အလှူရှင်စာရင်းတွင် မပါဝင်သေးပါက Comment တွင်ရေးသားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။)
(4/9/2015)နေ့အထိ လှူဒါန်းပြီးအလှူငွေစုစုပေါင်း= ၃၂,၈၈၀,၀၀၀ ကျပ်
--------------------------------------------------------------------------- အလှူရှင်များအားလုံးကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်လျှက်-
Moe Htet Myint Mo & her tatto
Number of View: 672Mom & Baby Magazine, အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁) ကစ်တုန်က ငါးတန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကစ်တုန်ရဲ့ ကျောင်းနာမည် က ဝေဟင်ထွဋ်ခေါင် ဖြစ်...
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း (၇)နှစ...